Musharax xabsi ku jira oo qarka u saaran inuu ku guuleysto -News and information about Somalia
Home Warkii Musharax xabsi ku jira oo qarka u saaran inuu ku guuleysto
Musharraxa doorashada madaxtinimo ee dalka Tunisia oo gaaray wareegii ugu dambeeyay ee doorashada isaga oo ku jiro xabsi ayaa ku guuldareystay racfaan uu qaatay.
Nabil Karoui oo 56 jir ah ayaa xabsiga la dhigay bishii lasoo dhaafay kaddib markii lagu soo oogay dacwado la xiriira isdaba marin lacageed ah iyo musuq maasuq dhanka canshuur bixinta ah.
Ninkan oo meel ka gaaray xirfadda warbaahinta ayaanan loo ogoleyn inuu codeeyo balse waxaa uu gaaray wareeggii ugu dambeeyay ee doorashada la filayo inay Tunisia ka dhacdo bisha dambe.
Nabil weliggiis, ma uusan qaban xil siyaasadeed balse waxaa uu sameeyay barnaamij tabarucaad ah oo uu kula dagaalamayo macluusha kaasoo kamid ahaa ololihiisa doorashada.
Dadka dhaleeceeya siyaasaddiisa, waxay ku eedeeyeen in barnaamijkaas iyo telefiishiinkiisa uu ku fulinayay ololihiisa siyaasadeed.
Nabil Karoui, wuxuu horraantii bishan bilaabay inuu cuntada ka soomo si uu xoriyaddiisa dib u helo, iyadoo Kamel Bin Mascuud oo ah qareenka siyaasigan uu sheegay in go’aanka ay si weyn uga hor imanaayaan isla markaasna ay dadaal u galayaan sidii loo sii deyn lahaa Nabil.
Previous articleMadaxweyne Deni oo Magaacabay Guddi wasiiro ah iyo faahfaahin laga bixiyey
Next articleDayuuradaha Maraykanka oo duqeyn qaldantay ku laayey shacab 30 ka badan
DAAWO SAWIRO:-RW Khayre oo shacab fara badan salaadii ciida kula tukaday...